Fiofanana ho mpitsara-mpanadina - DELF DALF MADAGASCAR
Fiofanana ho mpitsara-mpanadina
Ry Mpampianatra teny frantsay manana DALF, ny Alliances françaises dia manolotra ireo fiofanana ahafahanao ho lasa mpitsara-mpanadina ny DELF.
Ireo fiofanana ireo dia manamafy ny fahaizanao ny teny frantsay ary ahafahanao miditra ao amin’ny sehatry ny DELF DALF, ka ahatonga anao ho mpanadina ireo adina am-bava ary ho mpitsara ny adina an-tsoratra.
Ahafahanao mianatra ary ahafantarana tsara ny mombamomba ireo diplaoma A1 hatramin’ny B2, ahafahanao mitsara ireo famelabelarana an-tsoratra sy am-bava amin’ireo sokaji-pahaizana rehetra. Ho hitanao amin’izany hoe ahoana no ampidirana an’ireo fanamarinam-pahaizana ireo amin’ny fampianaranao isan’andro.
Ny fahafahana mitsara dia mitaky fahavononana tanteraka ary manankery arakaraky ny vokatra azonao amin’ireo zavatra atao sy ireo fitsapana atao nefa koa miankina amin’ny fahaizanao mampianatra sy mampita hafatra.
Raha mila fanazavana fanampiny, manantona ny ivo-toeram-pitantanana fanadinana.
Fifandraisana: certifications@alliancefr.mg ou 032 05 119 22.
Posted on 23 January 2017 23 January 2017 Author Rivo RavalosonCategories actualite ma
Previous Previous post: 2016 taona zina ho an’ny DELF
Next Next post: DELF PRIM sy DELF JUNIOR Aprily 2017